Kedu anụ dị mma maka obi? - Ihe Oriri
Isi > Ihe Oriri > Anụ ahụ siri ike - ajụjụ nkịtị
Kedu anụ dị mma maka obi?
Amachi abụba he nkeanụ.
Anụ ehi, ndị na-ekweghị ekwe ma na-ata ala gburugburu ma ọ bụ sirloin.
Ọkụkọ ma ọ bụ toki na akụrụ aka, agbasaghị, ọkpụkpụ.
Ọkụkọ ma ọ bụ toki, ala.
Azụ, nke dị elu na omega-3s, dị ka azụ asa, makarel, salmọn, ahịhịa, tuna.
Ezi anụ ezi, edozi abụba.
LEE 'TAA' GOSI RADIO, SIRIUS / XM 108.SIRIUS / XM 108. >>> UGBUA NA-AKA ỌGW >> AH NA >>> UGBU A NA-EGO NA NKE nri na otu ị ga-esi jiri ya na otu ị nwere ike isi N'IME IHE NILE GHỌR WITH N'ILE NILE SITE ỌR HE ỌR TO IHE IHE ỌR PAA NA IHE ỌR HE ỌR TO.
MEHMET OZ KWES THER DR DR. OZ GOSI. 'NA-AKWOSTKWỌ' NDDR.
OZ GOSI. 'NA Ọdee akwụkwọ ọhụrụ. NA Ọdee akwụkwọ ọhụrụ.
I DIWO AKW MANYKWỌ ỌT MANYT.. I DERE ONYE N’IME ỌT YOUT YOU W D WR ONE MADARA N’IME IHE KWERE. GN N MERE? GN N MERE? >> AKW BKWỌ M DERE M >> YOULỌ AKW IKWỌ M DERE HA Kpọrọ unu BOEKOK, M NA-ECHE NA-ECHI NA AKA AH SCla sayensị.
Chọrọ ka dọkịta gị nyere aka na usoro ahụ. Ma ọ bụ nyere usoro ahụ aka. MA ndị dọkịta na-amatakwu, mana ndị dọkịta na-amata na anyị nwere sayensị siri ike fọdụrụ, na anyị nwere sayensị siri ike iji gosipụta na ihe mgbakwunye na-edozi ahụ na-enye ndị na-agwọ ọrịa maka ọgwụgwọ dị mma maka ndị America kachasị mma. >> IHE NRI FIXES.RICANS. >> IHE NRI nri.
OKWU OZI. OKWU OZI. >> Ihe ise ya. >> Ihe ise ya.
UBANYERE BILE. 'M', ezigbo PROTEINS. 'M', ezigbo PROTEINS.
NKWUKWU Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri na mkpụrụ osisi na anụ ọhịa na SUGAR.SUGAR. Ọ B IFR YOU NA ENBAN A N'OKWU OCLỌ NKWUKWU MGBE AB AR SH OPlọ Ahịa, Gaa na ya, abanyela na ụlọ nke ihe.
B'GH TH ECHEBU EBU EBU EBU EGO, NA-EMET EV IHE Ọ B Hla AH B AH YOUR AH R NA-AZAGPARA Gị. Nduzi ka aru gi ji zaghachi gi. >> HERE Anyị nwere ezigbo ihe nlereanya. >> HERE Anyị nwere ezigbo ihe nlereanya.
UBANYERE BILE. >> Ọrịa ọrịa bụ ihe kachasị mma >> Ọrịa ọrịa bụ ihe atụ kachasị mma nke otu nri pụrụ isi kpochapụ ya.
Ihe Nlereanya nke otu nri pụrụ isi mezie ya. P SR S IME OLB CHROL CHOLESTEROL NA A KIELBASA; ỌRES CHOLESTEROL NA A KIELBASA. Ọ D WORGH WOR RKR YOU KA Ọ D YOU KA IT B IT AS AS AS MU AS AS YOU NA-ECHE.
ELP THE GOODCHOLESTEROL. I Nwere ike inweta mmanụ. Achọrọ m ezigbo nsụgharị ya.
Achọrọ m ezigbo nsụgharị ya. Mmanụ oliv ma ọ bụ mkpụrụ oliv. Mmanụ oliv ma ọ bụ mkpụrụ oliv.
EDEMAME.EDEMAME.AVOCADO nwere abụba ahụike n’elu ha.
UBU NILE NA NUTU NILE NA NUTBUTTER.BUTTER.ES NA-ENWETA, N’IHI NA HA SIKERE, N’IHI NA HA NA-ENWETA UGO.
Otutu ndi na-eri nri. >> Ha hụrụ A ANgha protein. >> Nke a bụ Azụ ọkụkọ efere .. >> Nke a bụ a ọkụkọ efere.
Anyi nwere ego maka ya Anyi nwere nnabata maka ya. Nke a nwere ogo 40 nke protein. Nke a nwere ogo 40 nke protein. Gram 40 nke protein, gram 3 nke gram 40 nke protein, gram 3 nke abụba jupụta, abụba zuru ezu. >> Ha na-ekwu Nlekọta nri nri >> Ha na-ekwu Nlekọta nri nri ndị na-adịghị ahụkebe.
IHE ndị a abụghị ihe a na-ahụkebe. NKWA A DS KA JICAMA. NKWA A DS KA JICAMA.
Enweghi m echiche ọzọ ihe ndị a abụghị mkpụrụ osisi ndị ọzọ. >> Ebe a ihe gbasara VEGETABLES.THE NKE B V VEGETABLES.IT IKWUKA Nri nri KWES THER B ISI NKE nri CANFIX IT.FIX YOU.EBPERENT GORR B AH OF Otu Nri.
EBERE otu Nri ahụ. GA-ACH C ABLỌ? O yikarịrị ka ị nwere ike ịkụda YAJICAMA. O yikarịrị ka ị nwere ike ịkụda YAJICAMA.
Nnukwu Isi mmiri ọgwụ na nri gị. Nri gị. >> Mmanya UGBU A. >> Mmanya UGBU A.
O wutere m. O wutere m. GWỌ M BANY T KWURU M. >> P DER DE VBANYE N’ỌD >>R CAN >> NKE DEBVR DE AB DER A N’ ABARA ỌR THAT NA MERE 100 Nde Ndị America Nwere 100 Nde Ndị America Na-arịa Ahụhụ.
FỌD AB BANYERE BANYERE PANL.IN.HOMROM IHE BANYERE PANL.IN.Ọ B ER YOU E R FOR FO Nri NA-Ag FLB FLRAM AMB IFR IF Ọ B IFR YOU NA YOU RI AH YOUR AH YOUR UNU Ọ GA-EJU. >> Ydị Ọrịa.
Mgbu. >> Ọ B PALA mgbu. >> Nnyocha nke osisi. >> Gbasara ụgbọ.
HA NA-ACHỌ THELỌ NT THETA AH THEY NA-ECHERE Ogbu mgbu. Nweta ya.
WETA YA. NA-EJI - EGO NA EJI EGO NARCOTICS - NARCOTICS anaghị arụ ọrụ na mgbu mgbu, nke anaghị arụ ọrụ nke ọma na mgbu mgbu. Arụ Ọrụ.
ab mgbatị maka ndị mbido
Arụ Ọrụ. Mmanya - ọ bụghị mmanya. Mmanya - ọ bụghị mmanya.
NA-ERITE N'AKA NA-ERI IHE N'ISI IWU.
KAFEJI B IS Nri. COFFEE B PA NKE PAINKILLER.PAINKILLER.
Mkpụrụ ego na-abaghị uru ị na-azụta ọgwụ ndị ị na-azụ maka ihe mgbu nwere caffeine INBUY FOR PAIN Have CAFFINE IN THEM. HA B AB BANYERE 40% ND OTHER ỌZỌ B 40 40% Ihe ndị ọzọ nke ọgwụ. NA Ndi mmadu nwere ahuhu na ndi nwere mmasi na ndu ha, Caffein di na ndu ha, Caffeinated na-aINKu ihe nwere ike ibelata.
Ọ DRụ nwere ike ibelata. >> G DON DO KA CINNAMON NA-EME? >> G DON DO KA CINNAMON NA-EME? >> Ọ B AN ANTI-INFLAMMATORY. >> Ọ B AN ANTI-INFLAMMATORY.
UBUBU BU NKWA NILE NKE SUGAR BU NKARI N’IME IWU. IHE mgbu. >> Iri abụọ IHE mgbu mgbu? >> Iri abụọ IHE mgbu mgbu? >> Mmiri ya. >> KEDU KA ANA-AAGHigh A WATU MMIRI B >> >> KWES CR C ANNBANNGH DR DR DRụ Mmiri B BE MB THE? NKE MBỤ? Ọ B IFR YOU na HB DER DE, INBỌR IF Ọ B IFR YOU NA YOU NA-EME, AH YOUR AH S NA-EKWU AH,, AY NA-EKWU AH YOUR gị, Ọ B ,R NE WATBORERORE ỌZỌ.
ỌZỌ MMAD WAT. NA MMIRI AKW CKWỌ KWES ISR AND KWES ANDR AND KWES ANDR AND. >> NA Iri Nri Ga-enyere Unu Aka? >> NA Iri Nri Ga-enyere Unu Aka? >> ANY D DIG IN A Bub With ICE CREAM >> ANY D DIG NA A B WITH NA NT CRRE NTỌRỌ n'ihi na anyị na-ahụ SNARKYCREAM N'IHI NA ANY SE NA-AHE NT TEKWU SNBỌCH AB Gbasara anyị.
Ihe banyere anyị. IHE YOU GA-ECHETA EBURU NKE Nri, I nwere ike mepụta nri, C NA-EJI IRI ya, AH WHOR ARE AHAL, AH HE SỌRỌ AHOT NA-A SW SWR WITH NA APU, NA-EJI EZI MGBE MGBE MIRI.
Ọ B IFR YOU na ịchọrọ ihe dị egwu, ọ bụrụ na ịchọrọ ihe ọjọọ na ọnụ gị, ị nwetara CHICKPEAS. Ọnụ gị, Nweta CHICKPEAS. Chọrọ nri, họrọ YOGURTY WAN chọrọ nri, họrọ YOGURT NA BLUEBERRY MIX.
NA BLUEBERRY MIX. NRI KWESOR YOU ịdọrọ gị. NRI KWESOR YOU ịdọrọ gị.
NA-EME KA ND O MMADUR N’IHI NA ECMUSE MMADUR N’IHI NA ANYOD NA-EKP USR, ANY,, NT H ANYUR NA-EME KA ANYURN D TOKA.
Kedu anụ kacha mma?
Kedu anụ kachasị dị na cholesterol?
Enwere ezigbo nhọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịtụle anụ ọkụkọ ma ọ bụ toki na-enweghị anụ ahụ; anụ ezi anụ ezi; ma ọ bụ anụ ehi gburugburu, sirloin, ma ọ bụ obi. Zere nke ukwuu arụ ọrụanụ(anụ ezi, ham, nri ehihie, wdg). Lelee oriri na-edozi labeelu na ngwugwu iji jide n'aka naanụdị 96% na 98% na-enweghị abụba.Ọgọst 24 2020
Nke a bụ n'ihi na ha na-ebu sodium na abụba juputara na oke, na-eweli cholesterol ọbara gị, nke na-etinye gị n'ihe ize ndụ maka ọrịa obi. Ma echegbula, ịchịkwa cholesterol gị esighi ike.
Ọ dị mfe dịka izere nri na-adịghị mma na abụba ọjọọ. N'isiokwu nke taa, anyị ga-agwa gị iri na asatọ ka ị zere ma ọ bụrụ na ị nwere cholesterol dị elu. Site na nkochi ime akwa, cheeseburgers, poteto a sụrụ akpụ, anụ na-acha uhie uhie na applesauce na ndị ọzọ, lee anya na njedebe iji chọpụta ihe niile.
Akwa akwa: Akwa akwa nwere otu nke kacha elu nke cholesterol nke nri ọ bụla na milligrams 1234 na gram gram 100 ma ọ bụ jiri 411 pasent nke uru kwa ụbọchị. Otu nkochi ime akwa na-enye miligram 210 nke cholesterol, ebe dum miligrams 212 na-enye obere ihe. Ya mere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ cholesterol niile na-etinye n'ime nkochi ime akwa.
Ọ bụrụ n’ezie na ịnweghị ike ime ma ọ bụrụ na i meghị ya, mgbe ahụ jikọta irikọ yolk yana ụfọdụ mmega ahụ na iri karịa 3 n’ime ha n’izu. Ihe kachasị mma ị ga - eme bụ izere ya kpamkpam ma rie protein ahụ naanị. Egg na-ahọrọ akwa ọcha ka ị na-ahọrọ akwa niile? Ugboro ole ka ị na-eri akwa? ọ kwa ụbọchị, kwa izu? na-agwa anyị ihe ndị dị n'okpuru! Imeju anụ: A na-emepụta cholesterol site na imeju, ya mere efere ndị a kwadebere n'akụkụ a nke ahụ na-eme ka ogo ha dịkwuo elu.
Akụkụ a sitere n'ọtụtụ anụ nwere ike ịbụ ihe dịka 564 nke cholesterol n'ime 100. nwere gram ma ọ bụ pasent 188 nke uru kwa ụbọchị. Ihe oriri akwadoro abụghị ihe karịrị 300 milligram nke cholesterol maka okenye toro eto.
Ugboro ato nke imeju anụ ehi esiri esi na choro cholesterol dị milligram 331. Ice Ice: Youmarala otu iko mmiri nke Ice cream? Ndi Mo nwere ude mmanu kariri hamburger na cholesterol kariri 10 glazed donuts? Mafere ngaji ma nwaa iko nke nkpuru osisi ọhụrụ maka eji megharịa ọnụ. Mkpụrụ osisi nwere obere kalori na eriri dị elu, vitamin, na nri ị chọrọ n'ezie - nke ha na-eme Otu n'ime ihe kachasị mma ị nwere ike iri bụ iwelata cholesterol gị.
Bọta: Ebe ọ bụ na abụba abụba kachasị abụba jupụtara na ya, butter butter na-abụkarị nke nwere abụba. Ekwesiri iri ya na oke ka abụba ahụike dabara na nri gị. Chọọ maka ahụike dị ka mmanụ oliv na ukpa.
Ma ọ bụ jiri akụ butter na ụtụtụ gị tost, n'elu butter na jam. Alfredo ihendori: pasta night? Ikekwe iji marinara ma ọ bụ pesto dị ka ihendori mgbe niile, gụnyere oge niile, nwere ike itinye aka na nnukwu ihe egwu nke ọbara cholesterol dị elu, ọkachasị ndị nwere nsogbu oke cholesterol. Ya mere, dobe oke izu ma ọ bụ kwa ọnwa dabere na mkpa na ebumnuche ahụike gị.
Ọkụkọ eghe: ọkụkọ eghere eghe bụ ihe ka njọ na ụlọ nri n'ihi nri ngwa ngwa na-esi nri na otu mmanụ ugboro ugboro na ọkụkọ eghere eghe, peepụ anụ ahụ ma ọ bụ esi nri n'ụlọ ụfọdụ mmanụ adịghị edozi ahụ dịka oliv ma ọ bụ ube oyibo. I nwekwara ike ighe ya na friji ikuku di oku iji belata abuba.
Oku e ghere eghe bụkwa ude dị ụtọ. Akwukwo oyibo: Aki oyibo bu okwu esemokwu dika ufodu ndi mmadu na a swearu iyi na o di mma, mana American Heart Association dọrọ aka na ntị megide iji ya n'ihi oke mmanu zuru oke. Nchoputa egosiputala na o na eme ka cholesterol di nma, ihe oma na ihe ojoo. Jiri ya na akpukpo aru gi, obughi na nri gi, belụsọ ma ihe ekpomeekpo di iche iche choro maka otu ihe eji eme ya.
I nwekwara ike iji ya na-eri obere na nri iji mee ka ekpomeekpo ya dị ka ngwa nri. Ọ bụghị n'ihi na ị chere na ọ bụ elixir ahụike, mana n'ihi na ịchọrọ agụụ ya uto na udidi. Macaroni na Chiiz: Ihe oriri na-atọ ụtọ nke creamy a nwere nwere okpukpu atọ nke abụba juputara.
A na-ejikarị mmiri ara ehi, bọta, na chiiz mara abụba mee mac na cheese kacha mma maka ịnụ ụtọ oge ụfọdụ. Pasta ahụ n'onwe ya na achịcha a na-etinye na butter nke na-eme ka ọ dị elu nwekwara ike itinye aka na ọkwa cholesterol na-adịghị mma. Nnyocha e mere egosiwo na carbohydrates ndị a nụchara anụcha dị ka achịcha ọcha na pasta ọcha nwere ike ime ka ọkwa cholesterol dị njọ.
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ibi na-enweghị mac na chiiz, wee họrọ maka nsụgharị nke ụlọ nke ejiri pasta ọka niile na mmiri ara ehi nwere obere mmanụ na chiiz mee. Uhie anụ: Nwa atụrụ, anụ ezi, na anụ ezi nwere kọlestrọl na abụba juputara na anụ karịa anụ anụ ọ bụla. Nke a ka dị njọ karịa ma ọ bụrụ na inweela cholesterol dị elu; ọ nwedịrị ike ịnwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi.
Kama, hota uzo ozo dika sie ma obu nke eghere eghe na azu ndi di elu na omega-3 fatty acids na Lesterol di na mmiri. Shrimp and Squid: Azụ mmiri ndị a nwere ike ịdị ụtọ, mana ha nwere cholesterol. Otu ounce 3.5 nke steepụ ahịhịa amịkọrọ nwere ihe dịka gram 211 nke kọlestrọl, ebe otu udia nke ahịhịa amị nwere gram 233.
Achịcha na eghe eghe na calamari na-abụ abụba, na-eme ka ha bụrụ nhọrọ ka njọ maka ịchịkwa ọkwa cholesterol gị. Y’oburu n’acho ihe n’eri mmiri, gbalia umu azu. Ije ozi 3.5 ounce nwere ihe kwesiri ka ọ were miligram 67 nke cholesterol.
Nduku Nduku: Poteto anọghị na nsogbu adịghị - ọ bụ ihe ndị ọzọ. Imirikiti poteto a sụrụ asụ, ọkachasị n'ụlọ nri, nwere nri dị ụtọ nke bọta, ude mmiri ara ehi, mmiri ara ehi niile na / ma ọ bụ chiiz ude, ha niile na-eme ka poteto zuru oke dị mma n'ime bọmbụ juputara na ya, na-emezi poteto ma tinye ha akwụkwọ nri, salsa ma ọ bụ obere abụba gbara ụka ude Storelọ ahịa a zụtara: muffins, kuki, na achịcha na-ejikọta akwara na-ekpuchi arịa dị ka bọta, shuga, na ntụ ọka a nụchara anụcha. Ihe oriri a zụtara azụ, ọkachasị, na-abatakarị n'ọtụtụ nri, nke nwere ike itinye aka na ogo kọleji na-adịghị mma ma ọ bụrụ na ị na-eme ọtụtụ oge.
Fọdụ ihe eji eme azụmahịa na-enwe abụba trans, nke na-adịghị emerụ ahụ n'ihi na ha na-eme ka ị ghara ịrịa ọrịa obi. Dị ka nri esi nri, ọ dị mkpa ịlele akara iji jide n'aka. Maka nkasi obi nke iri nri ụtụtụ, mee ka ọrụ Muffinson mee na ngwụcha izu ma kpoo ya maka ọdịnihu.
Naanị wepụ otu n'ime friza n'abalị ahụ tupu ịchọrọ iri ya, ma zee ya na ngwa ndakwa nri maka 10-15 nkeji na ụtụtụ maka nhọrọ ahụike, dị ọhụrụ site na oven. Ihendori apụl: Otu apụl kwa ụbọchị nwere ike igbochi dọkịta ahụ Ma ọ bụrụ na ị wepụ yipụ apụl dị elu nke apụl ma tinye ihe na-atọ ụtọ, dị ka ọtụtụ ndị na-eme apụl, ị ga-enweta nri a na-edozi nke nwere shuga na ala dị ala eriri. Nke a bụ usoro zuru oke maka mgbanwe shuga shuga na-eweli cholesterol.
Mgbakọ apụl toro eto bụkwa ọgaranya na ọgwụ ahụhụ, nke jikọtara na oke ibu na ọrịa metabolic. Anụ nri esiri esi nri: sausages, anụ ezi, na nkịta na-ekpo ọkụ bụ nri cholesterol dị elu nke ị kwesịrị iri na obere ọnụọgụ. Ejikọala nri ndị a na ọnụọgụ ọrịa obi na ọnụọgụ ụfọdụ, dịka ọrịa kansa.
Otu nnyocha dị ukwuu mere ka achọpụta na a na-ejikwa gram iri ise ọzọ nke anụ esiri esi mepụta kwa ụbọchị na pasent 42 dị elu nke ọrịa obi. Cheeseburger: Ọ bụrụ n’ịdị ka ọtụtụ ndị Amerịka, ị na-eri nri ehihie mgbe ụfọdụ n’ụlọ nri ngwa ngwa. Mana tupu ị nye iwu na cheeseburger abụọ ahụ, cheta: McDonald's Big Mac nwere gram 10 nke abụba juputara na Wendy's Classic Double With Ihe niile nwere onye na-ejikọ gram 20 karịa akara ụbọchị a tụrụ aro.
Ma eleghị anya, ịchọrọ ịhapụ fries na ịma jijiji, ma ọ bụ ka mma, ịtụ ịtụ burger. Nchịkọta nri: Achịcha nri dị ka ibe, Mayonezi, ndị na-akụwa nri, na microwaveable popcorn nwere abụba abụba n'ụdị mmanụ hydrogenated. A na-eji ha n'ihi na ha na-abawanye oge ndụ nke ngwaahịa.
Can nwere ike ịnọpụ na ndị omempụ cholesterol ndị a site na iji nlezianya na-enyocha aha nri dị ka gram 0,5 nke abụba abụba kwa na-eje ozi ka nwere ike igosi '0 trans fat' na akara nri. Kama, lelee ndepụta ihe ndị mejupụtara.
Ọ bụrụ na ị hụ okwu ahụ bụ 'hydrogenated,' azụrụ ya. Ngwaahịa Mkpụrụ Akọwapụtara: Nri sitere na ọka ma ọ bụ ntụ ọka a nụchara anụcha nwere carbohydrates a nụchara anụcha nke nwere ike imetụta mmetụta dị mma nke cholesterol dị mma. Zere iri ngwaahịa ọ bụla dịka achịcha ọcha ma ọ bụ pasta.
Nwere ike dochie ngwaahịa ndị a site na iji ụzọ ọzọ ka mma dị ka multigrain ma ọ bụ achịcha ọka niile. Mmanya: Ọ bụ ezie na mmanya n’onwe ya enweghị cholesterol, ọ nwere ike imetụta ogo ọbara ya. Mmanya na-egbu egbu nwere ike ibuli cholesterol n'ihi na ọ bụ otu akụkụ ahụ, imeju na-edozi mmanya na-egbu egbu.
Nnyocha egosiwo na ị drinkingụbiga mmanya ókè nwere ike ibute cholesterol ọjọọ. Ugboro ole ka ị na-eri nri ndị esiri esi nri? O duru gị nwee nsogbu kọlesterol - ka anyị mara n'ihe ndị a n'okpuru!
Kedu nri nri anụ ahụ kachasị mma?
Obi kacha mma-ime enyinrikarie
ọtụtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri.
enweghị anụ ọkụkọ.
akụ, agwa, na mkpo.
mmanụ ndị a kụrụ akụ, dị ka mmanụ oliv.
ngwaahịa mmiri ara ehi dị ala.
Ndewo, a bụ m Andrea Ho, abụkwa m Daphna Steinberg, anyị bụ ndị na-ahụ maka nri na Schulich Heart Center na Sunnybrook Health Sciences Center. Iri ezigbo nri bụ ụzọ dị mkpa iji chekwaa ahụike obi. Na nkeji ole na ole sochirinụ, ọ ga-amasị anyị ịkekọrịta azịza nye ụfọdụ n'ime ajụjụ a na-ajụkarị gbasara ahụike dị mma nke obi.
Enwere m cholesterol dị elu. Ekwesịrị m ịhapụ nri dị na kọleji dịka akwa na azụ azụ? Cholesterol dị na nri gị nwere ntakịrị ntakịrị mmetụta na ogo kọlestrọl ọbara gị. Nke a bụ n'ihi na imeju gị na-ewepụta ọtụtụ kọlestrọl n'ahụ gị.
Ihe na-emetụta cholesterol dị n’ọbara bụ oke na ụdị abụba ị na-eri. Zọ kachasị mma iji belata kọlụm ọbara gị bụ ịhọrọ nri abụba dị ala. Họrọ anụ ndị na-esi ike, anụ ọkụkọ na anụ ndị nwere mmiri ara ehi dị ala, ma belata nkochi ime akwa, akụkụ edo edo nke akwa ahụ, ruo 3 kwa izu. dị ka oporo na skwid, bụ obere abụba ọzọ maka iri anụ ma nwee ike ịnụ ụtọ ya otu ugboro n'izu.
Scallops, clams, lobsters, na crabs dị obere na cholesterol ma nwee ike ịnụ ụtọ ya oge niile masịrị gị. Enwere ọtụtụ nri dị iche iche. M Kwesịrị itbelata Abụba M ?akeụ? Abụba dị oke calorie.
Kwụsị iri nri gị ma ọ bụrụhaala na ị naghị edochi calorie na calorie na-adịghị mma nwere ike inye aka n'ị nweta na ịnọgide na-enwe ahụ ike. Typesdị abụba ị na-eri nwekwara ike imetụta ọkwa cholesterol gị. Abụba ndị a na-ejupụta na abụba ndị ọzọ nwere ike ime ka choro LDL gị ma ọ bụ cholesterol ọjọọ.
Nri mara abụba na-esitekarị na anụmanụ, yabụ anụ na mmiri ara ehi nwere abụba abụba kachasị elu. Jide n'aka na ị na-ahọrọ anụ na-enweghị anụ na anụ ọkụkọ na-enweghị akpụkpọ anụ, ma bepụ abụba ọ bụla a na-ahụ anya na anụ gị. Nwee anụ abụba ndị nwere abụba dị ala dị ka mmiri ara ehi skimmed ma ọ bụ 1% mmiri ara ehi na yogọt 0%.
Typedị abụba a dị njọ karịa obi gị karịa abụba jupụtara na ya, yabụ ọ dị mkpa ịhọrọ nri ndị na-enweghị abụba trans. Tupu ịzụta ihe oriri ndị a na-ere ere, lelee nkwakọ ngwaahịa iji jide n'aka na ọ nweghị abụba trans. Chọọ nkebi ahịrịokwu dịka “abụba trans,” “0 trans fat,” ma ọ bụ “enweghị abụba trans.” Lelee ndepụta ihe eji eme ihe - jide n'aka na 'mkpụmkpụ' ma ọ bụ 'obere mmanụ hydrogenated' anaghị edepụta dị ka ihe eji eme ihe.
Ọ bụrụ otu a, họrọ ngwaahịa na-enweghị ihe abụọ a. Zere iji margarine siri ike nke dị na abụba abụba. Kama nke ahụ, jiri margarine na-abụghị hydrogenated nke na-ebufe abụba na abụba dị oke abụba.
Kedu mmanụ kacha mma iji sie nri? Mmanụ esi nri bụ ezigbo abụba nke abụba ndị siri ike a na-akpọ abụba ndị na-adịghị edozi ahụ. Mmanụ ndị kachasị mma maka isi nri bụ mmanụ oliv na mmanụ canola. Ọ bụrụgodi na ha bụ ezigbo mmanụ, ọ ka dị mkpa ka ị belata oke mmanụ ị ga-eji esi nri.
Jiri usoro nri obi dị mma nke anaghị eji mmanụ dị ukwuu, dịka: B. Steam, poaching, baking, frying and stir-frying. Zere ighe miri emi ma ọ bụ ighe ite.
Ọbụlagodi na ị na-eji mmanụ dị mma, nri gị ga na-amịkọrọ mmanụ buru ibu n'oge usoro nri. Mgbe ị na-agbakwunye mmanụ na kichin gị, jiri ihe ịgba mmanụ ma ọ bụ tụọ mmanụ ị ga-eji. Anụla m ọtụtụ ihe banyere omega-3s dị mma maka obi m, mana echeghị m ihe ọ bụ.
Nwere ike ịgwa m ihe gbasara ya? Abụba Omega-3 bụ abụba dị mma nke anyị kwesịrị itinye na nri anyị n'ihi na ahụ anyị enweghị ike ịmepụta ha n'onwe anyị. Anyị chọrọ ka ha mụbaa cholesterol dị mma anyị ma mee ka arịa ọbara anyị na-agbanwe. Ebe kachasị mma bụ azụ dị mmanu dịka salmọn, tuna, trout, makarel, azụ asa na sardines.
Nwere ike ịhọrọ azụ ọhụrụ, oyi ma ọ bụ azụ mkpọ. Ọ bụrụ n'ịhọrọ ịga maka azụ mkpọ, gbaa mbọ hụ na etere ya na mmiri karịa mmanụ. Ikwesiri iri ụdị azụ a ọ dịkarịa ala ugboro abụọ n'izu.
Ọ bụrụ na ị naghị eri azụ, ị nwere ike nweta omega-3s site na walnuts, mkpụrụ flax n'ala, mkpụrụ osisi chia, mkpụrụ ugu, na ọka wheat. Nwere ike ịnụ ụtọ mkpụrụ ndị a na mkpụrụ osisi kwa ụbọchị, mana gbaa mbọ hụ na edobeghi ha ma edozighị ha na mmanụ. Amaara m na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị mma.
Ekwesịrị m ilekwasị anya n'ihe ọzọ? Mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bara ọgaranya na vitamin na mineral ma bụrụkwa nnukwu isi iyi nke fiber. Faiba nwere ike inye aka wedata ogo cholesterol na ọbara mgbali elu. Ọ na - enyere gị aka inwe ogologo oge zuru oke, nke na - enyere aka inweta ma jigide ahụ dị mma.
N'ezie, eriri na-aba uru iji mee ka eriri afọ gị dị ala. E nwere ụdị abụọ nke eriri: Fiber soluble, nke na-enye aka karịsịa n'ịbelata kọlestrọl na ọbara mgbali; na eriri na-anaghị edozi mmiri nke na-eme ka eriri afọ gị na-adị kwa mgbe. Ọ dị mkpa ijide n'aka na ị na-eri ụdị eriri abụọ kwa ụbọchị.
Nri ndị nwere fiber nwere ike ịgbakwunye gụnyere psyllium, ngwaahịa oat dị ka oatmeal na oat bran, legumes, na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ụfọdụ dị ka apụl, ube, mkpụrụ osisi, mkpụrụ osisi citrus, broccoli, kọlịflawa, na ugu. Achọpụtaghị eriri na-enweghị ike ịgbanye na enwere ike ịchọta 'roughage' na achịcha ọka niile, ọka na pasta, akwụkwọ nri dị ka akwụkwọ nri na letus; na mkpụrụ osisi ndị ọzọ mara mma na akwụkwọ nri dị ka egusi na ose. Ọ bụrụ n ’anaghị eri eri ọtụtụ eriri, bido nwayọ ma hụ na ị na-a plentyụ nnukwu mmiri iji zere iwe iwe.
Enweghị m ọrịa shuga, achọkwa m ka? iji mara ihe m riri? Sugar na eme na nri ma obu etinye ya na nri. Sugar na eme dika nri dika nkpuru osisi na ihe ara ehi. Nri ndị a dị mma ma kwesịrị ị enjoyedụ ya n’ụbọchị.
Ihe agbakwunyere sugars gụnyere okpokoro okpokoro, mmanụ a ,ụ, sirop, na nri ndị gbakwunyela shuga dị ka: Ndị a gụnyere, dịka ọmụmaatụ, ihe ọ drinksụ drinksụ na-atọ ụtọ shuga, desserts, na mkpụrụ osisi dị ụtọ. Iri oke shuga na-agbakwunye nwere ike ibuwanye ibu na ihe egwu nke ibute ọrịa obi, ọbụlagodi na ndị na-abụghị oke ibu. Ya mere, ọ dị mkpa ịbelata oke shuga ị na-eri.
Inwe ọgwụgwọ oge ụfọdụ dị mma. Naanị cheta na mgbe ị nwetara ọgwụgwọ kwa ụbọchị, ọ bụghịzị ọgwụgwọ ma bụrụ omume. Echere m na m kwesịrị belata nnu m.
Kedu ka m ga-esi mee nke ahụ? Nnu nwere sodium, ọtụtụ sodium nwekwara ike iweli ọbara mgbali gị. A na-ahụkarị sodium na nri ọhụrụ, mana ihe karịrị 75% nke sodium anyị na-eri sitere na nri esiri na nri. Iji belata sodium gị, belata oke nnu ị na-eri site na ịghara itinye nri na nri gị na tebụl.
Mgbe isi nri, tinye obere nnu, ma ọ bụ jiri ahịhịa akpọnwụ ma ọ bụ nke ọhụrụ dị ka basil, thyme, ma ọ bụ rosemary kama nnu, ma ọ bụ jiri ngwakọta nke ahịhịa na ngwa nri, họrọ nri ọhụrụ mgbe ọ bụla enwere ike ma belata nri ndị a na-edozi, pickled, aokedụrụma, ma ọ bụ nnu Ọ bụrụ na ị na-eji nri mkpọ eme ihe, jide n'aka na ị ga-asacha ya nke ọma n'okpuru mmiri mbụ; nri ndị m na-eri dị mma, ma ejighị m aka ole m ga-eri. You nwere ike ịgwa m ihe gbasara obi ike akụkụ nha? Nchịkwa akụkụ dị mkpa iji nweta na ịnọgide na-enwe ezigbo ahụ ike. Easyzọ dị mfe iji mee nke a bụ usoro efere.
Jupụta ọkara nke efere gị na akwụkwọ nri. Otu ụzọ n'ụzọ anọ nke efere gị kwesịrị ịnwe protein dị ka azụ, mkpo, anụ ọkụkọ, ma ọ bụ anụ mara abụba. Akụkụ ikpeazụ nke efere gị kwesịrị ịbụ eriri dị elu, nri starchị dị ka achicha ọka niile, ọka were sie ike ma ọ bụ osikapa ọhịa, pasta ọtụtụ ọka, poteto nwere anụ ma ọ bụ ọka.
Nwere ike were iko mmiri ara ehi na mkpụrụ osisi megharịa ọnụ rie nri gị. Ọ bụghị nri ọ bụla ga-adabara usoro efere. Kedu ihe ị na-eme n'abalị Pizza? Ee, enwere ike inwe mgbede Pizza.
Naanị tinye otu echiche ahụ. Họrọ pizza nwere obere mkpo ọka na ọtụtụ akwụkwọ nri na ụfọdụ ọkụkọ ghere eghe. Ka nke ahụ mejupụta ọkara nke efere gị.
Ekem tinye salad buru ibu ma rie nkpuru osisi dika ihe uto. Gini bu ihe omuma di nma banyere iri nri? Mgbe ị na-eri nri, họrọ efere ndị ejikere esi nri dị mma, gụnyere efere e ghere eghe, sie nri, eghe eghe, ma ọ bụ sie. Họrọ efere ejiri anụ dị ọkụ, anụ ọkụkọ, azụ ma ọ bụ mkpo na-achaghị acha.
Họrọ efere nwere oke fiber nhọrọ, dị ka ọka wit dum ma ọ bụ multigrain pasta, aja aja ma ọ bụ osikapa ọhịa na sandwiches ejiri achịcha ọka wit dum. Jụọ ka ị ga-eji akwa salad na sauces dị ka nri n'akụkụ. Ahọrọla creamy na sọis.
Ma n'ezie echefula inine! Anyị nwere olile anya na ndụmọdụ ndị a ga - enyere gị aka ịme ka ahụ ike dị mma bụrụ akụkụ nke ndụ gị na usoro ị na-eme kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ọzọ, nweere onwe gị na-ala azụ Biko kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na ndị ọrụ ahụike gị maara na ịchọrọ ịgwa onye na-eri nri edebanyere aha.
Ọkụkọ ọ dị njọ maka kọlesterol?
Nke ahụ bụ n'ihi na nchọpụta ọhụrụ, nke e bipụtara na Tuesday na American Journal of Clinical Nutrition, na-ewelite ajụjụ banyereulo ozuzu okukonacholesterol. Obere ihe omumu ahu choputara na ichota oke anu uhie ma obu ochaulo ozuzu okukorụpụtara ọbara ka elucholesteroletoju karịa na-ewe ihe hà ego nke protein protein.June 4. Dec 2019
Kedu anụ arụ na-adịghị mma iri?
Ke ofụri ofụri, uhieanụ(ehi, anụ ezi na atụrụ) nwere abụba zuru oke (dị njọ) karịa ọkụkọ, azụ na akwukwo nri protein dị ka agwa. Abụba na trans fat nwere ike bulie cholesterol ọbara gị ma mee ka ọrịa obi ka njọ.Mar 26 2017
Àkwá dị njọ maka kọlesterol?
Ọkụkọakwabụ ego dị ọnụ ala nke protein na nri ndị ọzọ. Ha na-adịkwa adịcholesterol dị elu. Macholesteroln'imeakwaadịghị ka ọ na-ewelicholesterolọkwa ụzọ ọzọcholesterol-nri nri ndi nwere ihe dika trans fat na abuo juputara.
'Zereọ bụlanrinke nwere okwu 'trans,' 'hydrogenated,' or 'par hydrogenated' na aha a na-achota na ahianri, donuts, kuki na ịmị mkpụrụ, ”ka Dr. DeVane na-adụ ọdụ. “Nakwa, mara banyere calorie ole na-esite na shuga.
Iri ọkụkọ kwa ụbọchị ọ dị mma?
Iri ọkụkọ kwa ụbọchịadịghị njọ, mana ikwesiri ịkpachara anya mgbe ị na-ahọrọ nke ziri ezi ma na-esikwa ya nri.Ọkụkọnwere ike ibute nsị nri n'ihi salmonella, nje na-adị na yaọkụkọ ọkụkọnke nwere ike ibute ọrịa na-eri nri.Sep 28 2020
Ọkụkọ ọ jọkarịrị anụ ehi?
Ọkụkọdị elu na protein ma belata abụba ma e jiri ya tụnyere anụmanụ ndị ọzọ dịkaehi. Mgbe anyị chere echicheọkụkọ, anyị na-ezokarị aka na-acha ọchaanụ. Ihe na-acha ọchaanụ, n'ụzọ bụ isiọkụkọara, bu ihe di nma nke diri ndi choro obere mmanu, nke nwere ezigbo protein.
Kedu anụ kacha mma iri na obi nri dị mma?
Anụ anụ ahụ na azụ bụ anụ kacha mma maka nri na-edozi ahụ. Ebe E Si Nweta Foto: Comstock / Stockbyte / Getty Images. Rie nri na-edozi ahụ, ị ​​ga-ebelata ihe ize ndụ nke nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok. Obi na-edozi ahụ dị obere na abụba ndị jupụtara na trans, cholesterol na sodium mana nnukwu eriri.
campagnolo ụgbọ ala wiil
Enwere uru ahụike dị na iri anụ ehi?
Obi amịrị nwere ike ịbụ akụkụ ahụike gị. A 4-oz. ije ozi nwere naanị calorie 130, yana 80 nke calorie ndị a na-abịa 20 g nke protein yana calorie 35 site na 5 g nke abụba. Obi anụ ehi nwekwara ọtụtụ vitamin B, lycopene, iron, phosphorous, potassium, sodium, selenium na zinc. Nke a Ọ Bụ Mberede?
Nwere ike iri anụ uhie uhie ma ọ bụrụ na ị nwere ọrịa obi?
Otu n'ime mmeghachi omume ikpere mbụ nke onye ọrịa nwere bụ bee anụ uhie n'ime nri ha n'ihi echiche ya dị ka oke cholesterol na abụba. Ma, tupu ị hapụ steaks na burgers kpamkpam, gee ntị na American Heart Association (AHA) banyere anụ ehi.